Myanmar Youth Media Club - Happy New Year ပါ ချစ်သူ
PoorBest Happy New Year ပါ ချစ်သူ
Thursday, 02 June 2011 00:00	Written by amedeo	Thoughts_sec	- Thoughts	TwitterSocButtons v1.4
“ဒေါ်ဆည်းဆာ.. New Year ရောက်တော့မယ်နော်။ ရှင်ဘာလုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားလဲ” ..သဉ္ဖာရဲ့အမေးကို ကြားလိုက်ရချိန်မှာ ဆည်းဆာတစ်ယောက် ကြိုးစားမေ့ဖျောက်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက အတွေးထဲကိုတားဆီး မရဘဲ ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဆည်းဆာချက်ချင်း ငြိမ်ကျသွားတာကြောင့် သဉ္ဖာကချက်ချင်း စကားလမ်းကြောင်း ပြန်လွှဲရှာပါတယ်။ “ဪ.. ငါ့အမအိမ်မှာ Party ရှိလို့ နင့်ကိုခေါ်မလို့ပါဟာ။ ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ ဟဲ့.. ဆည်းဆာ.. နင်အလုပ်ကကော အဆင်ပြေလား။ ငါတို့လည်း ကျောင်းပြီးကတည်းက ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေလိုက်ကြတာနော်။ ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ ၀တ်ရည်”..“အေးလေနော်။ အခုလိုမျိုးမတွေ့ရတာတောင် တော်တော်ကြာပြီ။ အခုတောင် အလုပ်ပိတ်ရက်မို့။ စိတ်လေပါတယ်ဟာ”..သဉ္ဖာရော၊ ၀တ်ရည်ကပါ သူမကိုအတွေးထဲက ပြန်လည်ဆွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် ဆည်းဆာစိတ်တင်းပြီး သူတို့နဲ့အတူ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေမိတယ်။ ညနေစောင်းလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အတိတ်က မဖိတ်ခေါ်ပါဘဲနဲ့ ဆည်းဆာရဲ့စိတ်ထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့ပါ တော့တယ်။31.12.2009-------------ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်မို့လို့ ဆည်းဆာတစ်ယောက် Laptop ရှေ့မှာပဲအချိန်ဖြုန်းနေမိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် မမချောနှစ်ယောက်က သူတို့ မိဘတွေလာတာကြောင့် အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ အားနာတာကတစ်ကြောင်း၊ တစ်ယောက်တည်း လည်း အပြင်မထွက်ချင်တာမို့ ဆည်းဆာတစ်ယောက် အိမ်ထဲမှာပဲအောင်းနေမိတယ်။ ပျင်းပျင်းရှိတာမို့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ရင်းနဲ့ Online Chat Room တစ်ခုမှာ register လုပ်ပြီး ဆည်းဆာဝင်လိုက်တယ်။ Group Chat ပုံစံမျိုးဆိုတော့ သူများတွေပြောတာကိုပဲ ဆည်းဆာ ထိုင်ကြည့်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဆည်းဆာကိုတစ်ယောက်က လာနှုတ်ဆက်တယ်။ nick က နတ်ဆိုးတဲ့။ ဆည်းဆာကတော့ နာမည်အရင်းတိုင်းပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ ခင်ဖို့ကောင်းတာကြောင့် Private chat ကနေ email acc ပေးပြီး စကားတွေပြောဖြစ်ကြတယ်။ New Year ကိုလည်း နတ်ဆိုးနဲ့အတူပဲ ဆည်းဆာကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဆိုးကဆည်းဆာနဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ နိုင်ငံကပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဆည်းဆာ Online မှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ နတ်ဆိုးနဲ့ စကားတွေပြောရင်းပေါ့။ ဆည်းဆာကို သူက တော်တော်ဂရုစိုက်ပါတယ်။ ဆည်းဆာဘက်က တချက်လောက် သူ့ကို reply လုပ်တာ ကြာသွားရင်တောင် ဆည်းဆာကို စိတ်ပူတတ်ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဆည်းဆာ သာယာမိတယ်ပေါ့။ဆည်းဆာနဲ့သိတဲ့သူ တော်တော်များများက ဆည်းဆာကိုပြောကြတယ်။ ဆည်းဆာက ရှုပ်တယ်တဲ့။ ရည်းစားများတယ်ပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆည်းဆာဘ၀မှာ ရည်းစားတွေအများကြီးထားခဲ့ဖူးတယ်။ အခုလက်ရှိမှာလည်း ဆည်းဆာဘေးမှာ ဆည်းဆာရွေးချယ်ဖို့ လူတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆည်းဆာ Online relationship ကို မထားခဲ့ဖူးဘူး။ ထားဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်မိတယ်လေ။ ဒီတစ်ခေါက် တော့ ဆည်းဆာ တွက်ကိန်းမှားသွားမိတယ်။ သူနဲ့စကားတွေပြောပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဆည်းဆာသူ့ကို ချစ်မိသွားတယ်။ ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ဆည်းဆာနဲ့နတ်ဆိုး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ ဆည်းဆာတို့နှစ်ယောက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြတယ်။၄ လလောက်အကြာမှာတော့ နတ်ဆိုးနဲ့ဆည်းဆာ ပြဿနာလေးတွေ စတတ်လာကြတယ်။ ဆည်းဆာက အရမ်းသ၀န်တိုတတ်တယ်လေ။ နောက်ပြီး နတ်ဆိုးကဆည်းဆာအနားမှာမရှိတော့ ဆည်းဆာပိုပြီးစိတ်မချဖြစ်တာပေါ့။ အရာရာကိုစိတ်မချ၊ သ၀န်တိုတတ်တဲ့ဆည်းဆာနဲ့ အပေါင်းအသင်းများတဲ့နတ်ဆိုးတို့ အဲဒီမှာစတွေ့တာပဲပေါ့။ နတ်ဆိုးနဲ့စကားပြောနေရင်းနဲ့ သူ typing ရိုက်တဲ့ အသံကိုကြားရင်တောင် ဆည်းဆာနေလို့မရဖြစ်နေတယ်။ ပြဿနာဖြစ်ပေါင်းများလာတော့ နတ်ဆိုးလည်းစိတ်ညစ်လာတယ်။ ဆည်းဆာလည်း အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆည်းဆာ သူ့ကိုလက်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူနဲ့တစ်ခါရန်ဖြစ်တိုင်း ဆည်းဆာသေမတတ်ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုလည်း မုန်းမိတာအမှန်ပဲ။ ဆည်းဆာကအရမ်း မာနကြီးတယ်။ ခေါင်းလည်းမာတယ်။ ဘယ်တော့မဆို သူများကိုအနိုင်ရရမှ။ အခုဆည်းဆာ နတ်ဆိုးကို ရှုံးနိမ့်နေပြီ။ မသိလိုက်ပါဘဲနဲ့ ဆည်းဆာသူ့ကို အရှုံးပေးနေမိတယ်။ နတ်ဆိုးကဆည်းဆာအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဆည်းဆာသူ့ကို ချစ်သူလို့သုံးနှုန်းတယ်။ ဆည်းဆာဘ၀အတွက် တကယ်ချစ်တဲ့သူမို့လေ။ နတ်ဆိုးနဲ့ဆည်းဆာတို့အကြောင်းကို ဆည်းဆာသူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးသိကြတယ်။ သဉ္ဖာနဲ့ဝတ်ရည်ကတော့ အမြဲပြောတယ်။ မဖြစ်နိုင် ပါဘူးတဲ့။ သူတို့ပြောတာကို ဆည်းဆာဂရုမစိုက်ဘဲ ရှေ့ဆက်တိုးခဲ့ပါတယ်။ နတ်ဆိုးကသူ့ဆီကို မြန်မြန်လိုက်လာဖို့ ဆည်းဆာကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆည်းဆာက ကျောင်းမပြီးသေးဘူးလေ။ နောက်ပြီး ဆည်းဆာဘာမှ မပြင်ဆင်ရသေးဘူး။ ဆည်းဆာကိုယ်တိုင်လည်း အခုအချိန်ထိ စိတ်ထဲမှာဝေခွဲမရတာတွေ အများကြီးရှိနေတုန်းပါ။ အပြင်မှာတစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကို ဆည်းဆာ မိုက်မိုက်ကန်းကုန်နဲ့ လိုက်သွားရဲလားဆိုတာကို ဆည်းဆာကိုယ်တိုင် ဝေခွဲမရဖြစ်နေတုန်းပဲ။ နတ်ဆိုးကိုဆည်းဆာ အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆည်းဆာက မိန်းကလေးလေ။ အများကြီး စဉ်းစားရတာပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာတော့ နတ်ဆိုးနဲ့ဆည်းဆာနဲ့က ရန်ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ချစ်လိုက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခဏခဏဆွဲဆန့်ခံနေရတဲ့ကြိုးက သူ့အတိုင်းအတာကျော်သွားရင် ပြတ်ထွက်တတ်တယ်ဆိုတာကို ဆည်းဆာတို့မေ့နေခဲ့ကြတယ်။ ဆည်းဆာကနောက်ဆုံးနှစ် တတ်နေတဲ့ကျောင်းသူ တစ်ယောက်ပါ။ နောက် ၂ လ လောက်နေတော့ ဆည်းဆာကျောင်းပြီးသွားတယ်။ နတ်ဆိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့ ကြတာလည်း ၆ လလောက်ရှိပြီပေါ့။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းပြီးခါစဆိုတော့ အလုပ်ရှာရတာနဲ့၊ ကျောင်း ဆက်တတ်ဖုိ့ကို လုပ်ရတာနဲ့ ဆည်းဆာနဲ့နတ်ဆိုး အနေဝေးသလို ဖြစ်သွားတယ်။ နတ်ဆိုးဘက်က လည်း ဆည်းဆာကို သံသယတွေ ရှိလာခဲ့သလို ဆည်းဆာကိုယ်တိုင်လည်း အပြင်မှာသွားလာနေရ ပေမယ့် စိတ်ကနတ်ဆိုးဆီကို ရောက်နေခဲ့တယ်။ ဆည်းဆာတို့စကား ကောင်းကောင်းမပြောဖြစ်ကြ တာ တကယ်တော့ ၂ ပတ်လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆည်းဆာ ပြောခဲ့သလိုပေါ့။ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အဖုအထစ်တွေများလာခဲ့အခါ ၂ ပတ်ဆိုတဲ့ အချိန် ကလည်း အရာရာကိုပြောင်းလဲဖို့ တတ်နိုင်သွားခဲ့တယ်လေ။ ဆည်းဆာတို့နှစ်ယောက် ပြန်ပြီးစကားပြောဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က သံသယတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ၊ အရွဲ့တိုက်မှုတွေနဲ့ ညှိလို့မရအောင် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အားလုံးစိတ်ထဲမှာ ဘာမှမဟုတ်ဘူး လို့ထင်ပေမယ့် အရာရာကို serious ထားတတ်ကြတဲ့ ဆည်းဆာတို့ ကြားမှာတော့ ပြဿနာကရှင်းမရခဲ့ဘူး။ ဆည်းဆာကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအချိန်မှာ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ စိတ်အရမ်းရှုပ်နေတာကြောင့် သေချာဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားဘဲနဲ့ အလွယ်တကူ လမ်းခွဲစကားပြောခဲ့မိတယ်။ နတ်ဆိုးဘက်ကလည်း ယောကျာ်းလေးပဲလေ။ ဆည်းဆာဘက်ကတောင် အလျော့မပေးမှတော့ နတ်ဆိုးလည်း လမ်းခွဲတာကို လက်ခံခဲ့တယ်။မာနတွေအပြိုင်ထားပြီး ဆည်းဆာတို့နှစ်ယောက် လမ်းဆုံးအထိလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က နတ်ဆိုးကိုဆည်းဆာ နောက်ဆုံးတွေ့လိုက် ရတာပါ။ ဆည်းဆာ email acc ပြောင်းလိုက်သလို နတ်ဆိုးကိုလည်း တစ်ခါမှအဆက်အသွယ်မလုပ်ခဲ့ဘူး။ အရမ်းသတိရလာရင် နတ်ဆိုး ဓါတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျမိတယ်။ နတ်ဆိုးအသံကို အရမ်းကြားချင်လာရင် internet ကနေပြီး သူ့ဖုန်းကိုခေါ်မိတယ်။ ဆည်းဆာ ဖုန်းနံပါတ် မပေါ်အောင်လို့လေ။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ဆည်းဆာမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ နတ်ဆိုးကို တစ်ရက်မှမေ့လို့မရတာတော့ တကယ်ကိုအမှန်ပါ။ နတ်ဆိုးနဲ့ လမ်းခွဲပြီးသွားပေမယ့် နတ်ဆိုးဆီလိုက်သွားနိုင်ဖို့ကို ဆည်းဆာ ဆက်လုပ်နေခဲ့မိတယ်။ အလုပ်လုပ်နေပေမယ့် ပိတ်ရက်ကျရင် ဆည်းဆာစာတွေဖတ်တယ်။ ဆည်းဆာကျောင်းတွေကို application တွေ တင်ခဲ့တယ်။ ရူးတယ်ပဲပြောပြော နတ်ဆိုးကိုတော့ ဆည်းဆာ အပြင်မှာ တွေ့ဖူးချင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှမစဉ်းစားမိအောင် ဆည်းဆာနေခဲ့ပါတယ်။ ဆည်းဆာနေတတ်သွား ပြီလို့လည်း ထင်ခဲ့တယ်လေ။ နေ့လည်က သဉ္ဖာတို့နဲ့တွေ့တုန်းက New Year အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ ဆည်းဆာသတိထားလိုက်မိတာက နတ်ဆိုးကိုဆည်းဆာချစ်နေတုန်းပဲ။ ဆည်းဆာသူ့ကို နှစ်နှစ်ကာကာချစ်နေတုန်းပါပဲ။28.12.2010------------အဲဒီနေ့က ဆည်းဆာ အလုပ်မရှိတာနဲ့ အိမ်မှာပဲ အေးအေးဆေးဆေး နားနေမိတယ်။ အခန်း တံခါးခေါက်သံကြားလို့ ဆည်းဆာ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ဆည်းဆာတို့ အဆောင်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။
“Hey Seesar, there'saletter addressed to you. From overseas university I think. Here for you.”“Oh.. thz u so much Julie.”အခန်းဖော်လာပေးသွားတဲ့စာကို ဆည်းဆာသေချာကြည့်လိုက်မိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဆည်းဆာ apply လုပ်ထားတဲ့ University တစ်ခုက လာတဲ့စာပါ။ ဆည်းဆာလက်တွေ အလိုလိုတုန်လာတယ်။ တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ပဲ စာအိတ်ကိုဖောက်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။
“Dear Seesar Cho,Congratulations on your acceptance to the *** University.”
စာကို ဆည်းဆာ ဒီလောက်ထိပဲ ဆက်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆည်းဆာမျက်လုံးမှာ မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီလေ။ ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။ ဆည်းဆာ ပြောမပြတတ်အောင် ၀မ်းသာသွားရပါတယ်။ နတ်ဆိုးနဲ့ဝေးနေရပေမယ့် သူနဲ့တစ်နိုင်ငံထဲမှာ နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိက ဆည်းဆာကို မမြင် နိုင်တဲ့ အားတွေပေးနေပါတယ်။ ဆည်းဆာပျော်လိုက်တာလေ။ ဆည်းဆာဘယ်လိုမှ မထိန်းထားနိုင်တော့ပဲ နတ်ဆိုးဆီကို ဖုန်းလှမ်းခေါ်မိ လိုက်ပါတယ်။ Ring ၂ ချက်လောက်မြည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဆည်းဆာအကြားချင်ဆုံးအသံကို ဆည်းဆာကြားလိုက်ရတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ direct ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့ ဆည်းဆာဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း သူမြင်ရမှာပဲလေ။“ဆည်းဆာလား... ပြောလေ။ ဘာပြောစရာရှိလို့လဲ။ ကိုယ်တောင်ဆည်းဆာဆီ ဖုန်းဆက်မလို့လုပ်နေတာ”..“ကိုနတ်ဆိုး နေကောင်းတယ်နော်။ ဆည်းဆာပြောစရာရှိလို့ အကို့ဆီဆက်လိုက်တာ”..“အင်း. ကိုယ်နေကောင်းပါတယ်။ ပြောလေ ဆည်းဆာ။ ကိုယ်နားထောင်နေတယ်။ ကိုယ်လည်း ဆည်းဆာကိုပြောစရာရှိတယ်။ ရပါတယ်။ ဆည်းဆာ အရင်ပြောပါ”..“ဟုတ်ကဲ့။ အကို.. ဆည်းဆာကိုလေ.. ဆည်းဆာကို *** University က လက်ခံလိုက်ပြီ အကိုရဲ့။ အခုပဲစာရောက်လာတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ကျောင်းဖွင့်ရင် ဆည်းဆာတတ်ရတော့မယ်”..“ဆည်းဆာ တကယ်ပြောနေတာလား။ ကိုယ်နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးတာကို ဆည်းဆာကိုယ့်ဆီလာဖို့ ဆက်လုပ်နေခဲ့သေးတာလား”..“ဆည်းဆာ မလိမ်ချင်ဘူး။ အကို့ကိုဆည်းဆာ တစ်ရက်မှမေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆည်းဆာ ရှေ့ဆက်တိုး ခဲ့တာပါ။ ဆည်းဆာတို့နှစ်ယောက်ကြားက ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကို ဆည်းဆာတောင်းပန်ပါတယ်။ ဆည်းဆာမှားခဲ့တာပါ။ မထားသင့်တဲ့မာနတွေကို ဆည်းဆာထားခဲ့မိတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်နော်”..“ကိုယ်လည်းဆည်းဆာကို လုံးဝမေ့မရခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ဆည်းဆာကို ပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာလည်း ဆည်းဆာဆီကို ကိုယ်လာလည်ဖို့ လုပ်ထားတာကို ဆည်းဆာကိုပြောချင်လို့ပါ။ ဆည်းဆာကိုတွေ့ချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ကိုယ်လည်းလာမလို့ပါ”..
“အကိုတစ်ကယ်ပြောနေတာလား။ တစ်ကယ်ဆည်းဆာဆီ လာခဲ့မှာလားဟင်။ ဆည်းဆာအကို့ကို တစ်ခုပြောချင်တယ်။ ဆည်းဆာအကိုနဲ့ ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဆည်းဆာဘယ်သူ့ကိုမှလည်း စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါဘူး။ အကို့ကိုမေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တောင် ဆည်းဆာအစားထိုးဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးအကို။ အကို့နားမှာ မရှိနေနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဆည်းဆာအကို့ကို ဒုက္ခမပေးချင်လို့ အကို့အနားကနေ ရှောင်ထွက်သွားခဲ့တာပါ။ တစ်ကယ်လို့သာ ဖြစ်နိုင်သေးမယ်ဆိုရင် ဆည်းဆာကိုအကို ပြန်လက်ခံနိုင်မလားဟင်။ ဆည်းဆာရဲ့ မာနတွေအားလုံးကို ခ၀ါချပြီးအကို့ကို တောင်းပန်တာပါ”..“ဆည်းဆာ.. ဆည်းဆာလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ဒီလိုစပြောလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်မထင်ထားခဲ့ဘူး။ ဆည်းဆာရဲ့မာနတွေကို ဘေးထားပြီး ကိုယ့်ကို ဆည်းဆာချစ်နိုင်ရဲ့လား။ ကိုယ်အရင်ကလိုမျိုးပြဿနာတွေ ထပ်မတတ်ချင်တော့ဘူး”..“ဆည်းဆာ ဂတိပေးပါတယ်ကိုကို။ ဆည်းဆာကို ပြန်လက်ခံပေးပါနော်။ ဆည်းဆာတို့နှစ်ယောက် အတူတူဆက်လျှောက်ကြရအောင်နော်။ I love you so much and I can't forget you. I don't wanna lose you again. Plz ko ko”..“ကိုယ်လည်း ဆည်းဆာကို အခုထက်ထိ ချစ်နေတုန်းပါပဲ။ ကိုယ်တို့တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ဒီ Relationship ကို ပြန်စကြမယ်နော်။ ကိုယ့်ကို ၁ ရက်နေ့ကျရင် လေဆိပ်မှာလာကြိုနော်ဆည်းဆာ။ ကိုယ်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။ Bye.. love you so much babe”..1.1.2011------------ဆည်းဆာတစ်ယောက် ပြောမပြတတ်တဲ့အပျော်တွေနဲ့ နတ်ဆိုးကိုလေဆိပ်မှာ သွားစောင့်နေခဲ့တယ်။ လူတော်တော်များများက မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ Online relationship တစ်ခုကနေ ဆည်းဆာတို့ နှစ်ယောက်က အချစ်စစ်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ကြတာလေ။ ဆည်းဆာဘ၀အတွက် အပျော်ဆုံးနေ့ကို ပြောပါဆိုရင် New Year လို့ ဖြေမိမှာပါပဲ။ နတ်ဆိုးနဲ့စဆုံခဲ့ရတာလည်း New Year မှာပဲ။ အခုလည်း အရမ်းချစ်ရတဲ့နတ်ဆိုးကို အပြင်မှာတွေ့ရတော့မယ်လေ။ ဒါလည်း New Year ပါပဲ။ ဆည်းဆာ အတွက်တော့ New Year တိုင်းက အမှတ်ရစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတော့မှာပါလား။ ဆည်းဆာ တွေးနေတုန်းမှာပဲ နတ်ဆိုးလို့ထင်ရတဲ့သူတစ်ယောက် ဆည်းဆာဆီကို လျှောက်လာနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သေချာပါတယ်။ ဒါဆည်းဆာရဲ့နတ်ဆိုးပါပဲ။ ဆည်းဆာတစ်ယောက် မျက်ရည်တွေ ၀ဲလို့ အပျော်တွေနဲ့ သူမဘ၀ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ကြိုလင့်လို့နေပါတယ်။“အို.. ချစ်သူ။ နှစ်သစ်တိုင်းမှာ အပျော်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့ ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ။ အရာအားလုံး အတွက် ကျေးဇူးပါကွယ်။ ဒီတစ်နှစ်တာအချိန်လုံး ဘယ်လောက်ပဲအနေဝေးဝေး၊ ဘယ်လောက်ပဲ ကျွန်မဆိုးဆိုး ကျွန်မအတွက် အမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးခဲ့တဲ့ချစ်သူကို နှစ်သစ်မှာလက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မဂတိပေးပါတယ်ချစ်သူ။ နောင်လာမယ့် အနာဂတ်လမ်းမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲ ရှိပါစေ။ ဘာတွေပဲဖြစ်ပါစေ။ ကျွန်မလက်မလျှော့ဘူး။ ကျွန်မရဲ့လမ်းပြကြယ်ကို ကျွန်မအဆုံးရှုံးခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ချစ်သူရယ်.. နှစ်သစ်တိုင်းမှာ ဒီလိုပဲကျွန်မကို အပျော်တွေယူဆောင်လာပေးပါနော်။ Happy New Year ပါ ကျွန်မရဲ့ချစ်သူ...”..^AnGeL^ [7:26 AM] Written By | ^AnGeL^
New Year အတွက် Article လေး တစ်ခုလောက် တင်ရင်ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ ^AnGeL^ ကို ပြောပြလိုက်တော့ သူက သည်းထိပ်ရင်ဖို ပုံစံတွေပဲများနေပြီ။ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပေးမယ်ဆိုပြီး ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ့်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခုကို ပုံစံနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီး ရေးထားတာပါ။ ဖတ်ပြီးသွားရင်တော့ ဘာလေးပဲခံစားရ၊ ခံစားရ အောက်မှာတခုခု ရေးပေးခဲ့ဦးနော်။ ဒီ article လေးနဲ့အတူ MYMC ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်း Happy New Year မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Content View Hits : 8502470